भुसालले प्रचण्डलाई सोधे- 'नेकपाको बाटो समाजवाद कि पुँजीवाद' - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भुसालले प्रचण्डलाई सोधे- ‘नेकपाको बाटो समाजवाद कि पुँजीवाद’
काठमाडौं : नेकपाको अबको राजनीतिक बाटो समाजवाद कि पुँजीवाद ? नेताहरूबीच यसबारे सार्वजनिक मञ्चमै तर्क-वितर्क चलेको छ। नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्- ‘नेपाल समाजवादमा जान्छ कि जाँदैन? ’
संविधानमै समाजवाद उन्मुख देश लेखिएको छ। पार्टीको चुनावी घोषणापत्रदेखि कार्यक्रम समाजवाद भएको बताइएको छ। मुलुकको वस्तुगत धरातल र उपरी संरचना भने ‘दलाल पुँजीवादी’ देखिएको नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालबीच शनिबार देशलाई समाजवादको दिशामा लैजाने कि पुँजीवादी संरचनासँगै आत्मसमर्पण गराउने भन्नेमा बहस भयो। नेकपा भक्तपुर जिल्ला सचिव डीपी ढकालको पुस्तक ‘पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ-राजनीतिक विकासक्रम’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नेता भुसालले अध्यक्ष दाहाललाई र्‍याखर्‍याखती पारेका थिए।
उनले पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न सक्ने, त्यसले मात्रै जितेर पद लिने अनि फेरि थप पैसा कमाउने गरेको बताए। यस्तो अवस्थामा नेपाल समाजवादमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने जवाफ अध्यक्ष दाहालले दिनुपर्ने उनले बताएका थिए। ‘राजनीति कस्तो छ भन्दा बेसजस्तो छ संरचना त्यस्तै हुन्छ। बेस कस्तो छ ? दलाल पुँजीवादी छ। राजनीति दलाल पुँजीवादी छ। यसकोे वैधानिकता, निरन्तरता के कुराले पाउँछ भन्दा चुनावले पाउँछ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका नाममा दलाल पुँजीवादले निरन्तर आफैंलाई पुनः उत्पादित गरिरहन्छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ जहाँ पैसा नहुनेले केही गर्न सक्दैन। चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ।
यी हुन दुबई ह*ल्लाइरहेका एक नेपाली इञ्जि*नियर, कुलमानसँग भेटेर देश बनाउने इच्छा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ले लिए यस्तो निर्णय : दलका नेताहरुलाइ तनाब
आईजीपी दाइलाई ‘से´ल्युट’ गर्दा एसएसपी भाइका आँखा र´साए !